Khilaaf u dhaxeeya masuuliyiinta maamulka Galmudug oo ka jira magaalada Cadaado - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaKhilaaf u dhaxeeya masuuliyiinta maamulka Galmudug oo ka jira magaalada Cadaado
September 26, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Magaalada cadaado.
Cadaado-(Puntland Mirror) Khilaaf u dhaxeeya masuuliyiinta maamulka Galmudug ayaa ka taagan magaalada Cadaado ee xarunta maamulkaas, sida ay sheegeen ilo-wareedyo xog ogaal ah.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Cali Gacal Casiir iyo Madaxweyne Ku Xigeenka ayaa si buuxda uga soo horjeestay go’aanka uu soo saaray Madaxweyne Axmed Ducaale Geele Xaaf oo uu ku taageeray xulufada Sucuudiga.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal Casiir oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in isaga iyo Madaxweyne Ku Xigeenka ay ku jiraan xabsi guri.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in la xanibay loona diiday in ay madaxtooyada ka baxaan.
Cali Gacal Casiir ayaa sidoo kale sheegay in ciidanka NISA oo ilaalin jiray madaxtooyada laga badalay lana keenay ciidamo kale oo taageersan Madaxweyne Xaaf.
Maamulka yar ee Galmudug ayaa u muuqda in uu madaxa lasii gelayo khilaaf xoogan oo u dhaxeeya masuuliyiintiisa sare ee ku sugan Cadaado.
October 24, 2017 Madaxweynaha Puntland oo sheegay in uu ka qeybgali doona shirka Muqdisho
Moscow-(Puntland Mirror) Afhayeenka aqalka madaxtooyada Kremlin-ka ee dalka Ruushka, Dmitry Peskov ayaa maanta oo Isniin ah sheegay in Iran aysan ahayn dowlad argagixiso ah, isaga oo u jawaabcelinayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. “Kuma aanu raacsanin [...]